Kugeleza awenduduzo ngokudlula kukaMgojo | IOL Isolezwe
Kugeleza awenduduzo ngokudlula kukaMgojo
Isolezwe / 3 September 2012, 4:05pm /
EZINYE zezinsuku ezazimnandi ku-DKT Khoza Mgojo okwesokudla njengoba lapha exhawula uMengameli Jacob Zuma emcimbini wokumhlonipha owawuseMangosuthu University of Technology, abaphakathi nendawo uDkt Mangosuthu Buthelezi noSolwazi Mseshi Ndlovu. Isithombe: PATRICK MTOLO
UNOBHALA-JIKELELE we-ANC uMnuz Gwede Mantashe, uMfu Khoza Mgojo noDkt Zweli Mkhize komunye wemicimbi kaKhongolose. Isithombe: DOCTOR NGCOBO
INGENA ingenile imiyalezo yenduduzo emndenini wesishoshovu samalungelo abantu esayibamba ishisa ngesikhathi somzabalazo uMfundisi Dkt Khoza Elliot Mbuyisa Mgojo ngemuva kokudlula emhlabeni ngokuzuma izolo ekuseni.
UMgojo (80) ushonele esibhedlela lapho ebengeniswe khona exinwe wukugula.
UMengameli wezwe uMnuz Jacob Zuma ungomunye wabakhalise umndeni wadlulisa namazwi enduduzo, wathi isizwe silahlekelwe sonke ngokushona kukaMgojo.
UNobhala we-ANC KwaZulu-Natal uMnuz Sihle Zikalala uthe uMgojo ubengumholi obehlukile kwabanye ethanda abantu enza isiqiniseko sokuthi amalungelo abo nentando yeningi iyahlonishwa.
“Ukudlula emhlabeni kukaMgojo kudale ukuthi izwe nombutho kaKhongolose walahlekelwa wumholi onohlonze,” kusho uZikalala.
Uthe uMgojo ubengumholi wezenkolo kodwa enganqeni ukuzimbandakanya nezombusazwe ngesikhathi esinzima somzabalazo.
“Ungomunye wabaholi bezenkolo abaphumela obala bawugxeka uhulumeni wobandlululo, waphinde wanxusa ukuthi kube khona ukulingana ngokwenza lokho wazibeka engcupheni yokuthi aboshwe noma abulawe,” kusho uZikalala.
UZikalala uthe kubuhlungu ukuthi uMgojo udlule emhlabeni i-ANC isithathe isinqumo sokumenza umfundisi wayo esifundazweni. Uthe lesi sinqumo sisanda kuthathwa, wengeza ngokuthi bekumele agcotshwe ngoLwesine olwedlule kodwa umndeni wacela ukuthi umcimbi uhlehliswe ngoba esesibhedlela.
UNdunankulu waKwaZulu-Natal uDkt Zweli Mkhize uthe umufi ubeyisakhumizi esidala esingasabi lutho futhi ebesihlale sizimisele ngokuveza izimfumo zabantu abadala.
“Sizomkhumbula ngokuthi ubehlale ebuza uhulumeni ukuthi kungani abantu abadala bencishwa ithuba lokubamba iqhaza ezinhlelweni ezifana nokuthuthukiswa kwemigomo nezidingo zabo,” usho kanje.
Indodana kaMgojo uMnuz Mxolisi Mgojo ithe uyise udlule emhlabeni ngemuva kokugula okumxine kusuka ngonyaka odlule ephuma engena ezibhedlela.
“Yize ubaba ebengumuntu wabantu futhi ezinikele emzabalazweni nasenkonzweni, ubeqinisekisa ukuthi uyazinika isikhathi sokuba nathi nokuthi siyakuthola esikudingayo,” kusho indodana.
Iveze ukuthi uyise bazomfihla ngoLwesibili oluzayo (Septhemba 11) eGamalakhe, ePort Shepstone.